YEYINTNGE(ကနဒေါ): Wednesday, May 21
ဒီလအစောပိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းတွင်း သေဆုံးခဲ့သူဦးရေဟာ ၇ သိန်း ၈ သောင်း ရှိပြီး ပျောက်ဆုံးနေသူကတော့ ၅ သိန်း ၆ သောင်းလောက် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာစစ်အစိုးရက ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီ အများစုကို ငြင်းဆန်နေတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကူအညီအ ထောက်အပံ့တွေကို အကန့်အသတ်နဲ့သာ မြန်မာစစ်အစိုးရက လက်ခံနေတာပါ။
BY YeYint Nge ... 5/21/20080comment Links to this post
မြန်မာ့မုန်တိုင်းဘေးကယ်ဆယ်ရေး အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာ ကြားနာစစ်ဆေး
မြန်မာနိုင်ငံက နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ခဲ့မှုအပေါ် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ အင်္ဂါနေ့က ကြားနာပွဲတခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကျရောက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း သေဆုံးမှုတွေ၊ ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာတွေအပြင် နိုင်ငံတကာက ကမ်းလှမ်းကြတဲ့ အကူအညီတွေအတွက် စစ်အစိုးရရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို ကိုယ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာမှူး
ဒုတိယ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စကော့မာဆယ်နဲ့ USAID ဒု-လက်ထောက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဂရက်ဂေါလစ်တို့နဲ့အတူ NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်း အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်းတို့လည်း ပါဝင်ပြောကြားခဲ့ကြပါ
တယ်။ အကြောင်းစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ကူညီထောက်ပံ့
မှုတွေ လိုအပ်နေပေမယ့် မြန်မာစစ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာက ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ပေးနိုင်ဖို့လမ်းတွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးထားပြီး အခုထိ ပွင့်ပွင့်
လင်းလင်း မဆောင်ရွက်သေးပါဘူးလို့ မစ္စတာမာဆယ်က ပြောပါတယ်။ မကြာခင်
ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ အရင်ကထက်စာရင် ပိုပြီးရောက်ရှိခဲ့တဲ့အပြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက ဆေးဝန်ထမ်း
တချို့ အကူအညီပေးမယ့်သူတွေ ၀င်ရောက်ခွင့်ကိုလည်း မြန်မာစစ်အစိုးရက ခွင့်ပြုခဲ့
တာမို့ တိုးတက်မှုဟာ အနည်းအကျဉ်းတော့ ရှိလာပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီတိုးတက်မှုအတိုင်းအတာဟာ သိပ်နှေးကွေးလွန်းတဲ့အပြင် မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေ
အတွက် အကူအညီလိုအပ်မှုဟာ သိပ်ကိုကြီးမားနေသေးတာမို့ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေ
နဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရော တခြား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဖို့
လည်း မစ္စတာမာဆယ်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
“အခြေအနေတွေဟာ တနေ့တခြား ပိုပိုဆိုးဝါးလာတာ တွေ့ရတယ်။ ဆိုင်ကလုံးတိုက်
ပြီး နှစ်ပတ်ကျော်လာတဲ့အထိ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ဒုက္ခသည် လေးယောက်
ရှိရင် တယောက်ပဲ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးရသေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကူညီ
ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် တံခါးကို အခုထက်ပိုပြီး အမြန်ဆုံးပွင့်အောင် ဖွင့်ပေးရမှာပါ။
ဒါမှလည်း နောက်ဆက်တွဲပေါ်လာနိုင်တဲ့ ကပ်ဒုက္ခကနေ ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။”
ဒါ့အပြင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်သူတွေ လာရောက် ကူညီကယ်တင်ခွင့်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ခွင့်မပြုခဲ့ရင် သေဆုံးသူဦးရေဟာ ထောင်နဲ့
ချီပြီး တိုးလာမှာမို့ ဒီတွေ့ကြုံရတဲ့ ကပ်ဆိုးအတွက် တကယ်တာဝန်ရှိသူဟာ ဗိုလ်ချုပ်
မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ တခြား ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ပြောကြား
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ သဘာဝအန္တရာယ် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်သူတွေကို မျက်နှာ
လွဲခဲပစ် လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ သိပ်ကိုဆိုးဝါးလွန်းပြီး တွေးကြည့်ရင်တောင် မယုံ
နိုင်စရာ တွေ့နေရပါတယ်လို့လည်း မစ္စတာမာဆယ်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို ယူမနေဘဲ ဧရာဝတီတိုင်းထဲက ဒုက္ခသည်
တွေအတွက် ၀င်ရောက်ပြီး အကူအညီတွေပေးဖို့ လွှတ်တော်မှာ ဦးဆောင်ပြီး
တောင်းဆိုခဲ့သူ နယူးယောက်ခ် လွှတ်တော်အမတ် ဂျိုးဆက် ခရော်လီကတော့ …
“စစ်အစိုးရရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီတွေယူဖို့ ကြောက်ရွံ့နေတယ်
လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုကူညီမှုကနေ စစ်အစိုးရကို
တော်လှန်တဲ့အထိ ရောက်သွားမယ်လို့ သူတို့က ယုံကြည်နေလို့ပါပဲ။”
မစ္စတာခရော်လီဟာ အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော် အာရှ-ပစိဖိတ်ရေးရာ ကော်မတီ
ခွဲမှာ တာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အကူ
အညီတွေ တကယ်တမ်းမရောက်အောင် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ သူ့ရဲ့
လုပ်ရပ်တွေဟာ မှားယွင်းနေတယ်လို့ ရင်ထဲမှာတော့ တကယ်တမ်း သိနေတာပါလို့
လည်း မစ္စတာခရော်လီက ပြောပါတယ်။
USAID ရဲ့ ဒုတိယ လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဂရက်ဂေါလစ်ကလည်း မြန်မာစစ်အစိုး
ရအနေနဲ့ အကြီးအကျယ် အရေးပေါ်အကူအညီ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေဆီကို သဘာဝ
ဘေးဒဏ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေ မသွားနိုင်ရင် နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးမယ့်
သူတွေနဲ့ ဘယ်လိုလက်တွဲပြီး ကူညီရမလဲ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရာလည်း အင်မတန်မှ ခက်ခဲပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
NCGUB ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ
စိန်ဝင်းကို ဒီကြားနာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ …
“USAID က ပုဂ္ဂိုလ်ရော၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပုဂ္ဂိုလ်ရော သူတို့တွေလည်း မြန်မာပြည်
အခြေအနေ အကြောင်းတွေကို ပြောကြပါတယ်။ ကျနော်ပြောတဲ့ ပထမအချက်က
တော့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး ပြီးသွားတဲ့အခါ တကယ်တမ်းဆိုရင် ထိခိုက်တဲ့နေရာတွေ၊
ဒုက္ခသည်တွေကို ၁၀ ရက်အတွင်းကယ်မှ၊ ဒါထက်ကြာသွားရင် အင်မတန်မှ ခက်ခဲ လာတဲ့အခြေအနေ၊ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ၀မ်းရောဂါတွေဖြစ်မယ်၊ စားနပ်ရိက္ခာ
ပြတ်လတ်မှုတွေ၊ ငတ်မွတ်မှုတွေဖြစ်မယ်။ အခုတောင် ၁၄ ရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီ။
အဲတော့ အမြန်ဆုံး ကယ်ဆယ်ဖို့၊ ရိက္ခာတွေကို လိုအပ်တဲ့သူတွေဆီ ရောက်ဖို့လိုတယ်။
အဲဒါကို ခွင့်ပြုချက်တွေ စောင့်မနေဘဲ တိုက်ရိုက်ပေးသင့်တယ်၊ ပေးပါဆိုပြီး ကျနော်တို့ တောင်းဆိုတယ်။
“နောက်တခုက ဆန္ဒခံယူပွဲကိစ္စပေါ့။ ဆန္ဒခံယူပွဲက ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ
လူတွေက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်မလဲ။
အဲတော့ ဒါကို ကျနော်တို့ လက်မခံဘူး။ ဝေးလံတဲ့နေရာကို ပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအားလည်း
နအဖမှာ မရှိပါဘူး။ ဧရာဝတီတိုင်းမှာဆိုရင် လေယာဉ်တွေ၊ ရဟတ်ယာဉ်တွေ အများ
ကြီးလိုပါတယ်။ နောက်တခုက အခု ဆိုင်ကလုံးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ စားနပ်ရိက္ခာ
ပေးရုံနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘူး။ ဖျားနာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို
လုပ်ပေးဖို့က တကယ့်ကို ပညာရှင်တွေလိုတယ်။”
အောင်သက်ဝိုင်း/လပွတ္တာ | မေ ၂၁၊ ၂၀၀၈
လပွတ္တာမြို့၊ သကျမာရဇိန် ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကြီးရဲ့ မုခ်အ၀င်အ၀မှာ အရောင်မရှိ မွဲခြောက်နေတဲ့ အစိမ်းရောင်နိုင်လွန် အနွေးထည်၊ အဖြူရောင်ပျောက်ပြီး သံချေးရောင်ပေါက်နေတဲ့ ရင်ဖုံးအင်္ကျီနဲ့ စုတ်ပြဲဖာရာတွေပြည့်နေတဲ့ ၀ါညိုရောင် ခပ်ပုပ်ပုပ် ထဘီကို ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ အမယ်အိုတဦး ငူငုငိုင်ငိုင် ထိုင်လျက် ရှိပါတယ်။
မျက်ရည်များနှင့် အဖွားဒေါ်ကျင်လှ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
အမယ်အိုရဲ့ဦးခေါင်းမှာ ဆံပင်တွေက ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေပြီး အ၀ါရောင်ဘက် ခပ်ရောက်ရောက် အသားအရေရှိတဲ့ မျက်နှာက တွန့်လိပ်နေတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ ပိန်လှီဖျော့တော့ လွန်းလှတယ်။ သူ့ရဲ့ ချိုင့်ဝင်ပိန်လှီနေတဲ့ မျက်ဝန်းအိမ်ထဲမှာတော့ မျက်ရည်စတွေက စမ်းချောင်းတခုပမာ တသွင်သွင်စီးကျနေတယ်။
မျက်ရည်စတွေနဲ့ ဘုရားရင်ပြင်ရဲ့အရှေ့ဘက်အရပ်ဆီကို မျက်တောင်မခတ် ငေးမောနေတဲ့ အမယ်အိုရဲ့ အသွင်အပြင်ကို မြင်ရသူတိုင်း ရင်ထဲမှာအမျိုးအမည်မသိ ၀မ်းနည်းကြေကွဲစေတဲ့ ခံစားချက်တခု ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
သူကတော့ မေလ ၂ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြီး ကြောင့် မိသားစုဝင် ၁၂ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဘီတွတ်ကျေးရွာက အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် ဒေါ်ကျင်လှပါ။
မေလ ၂ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီဝန်းကျင်လောက်က ဘီတွတ်ကျေးရွာ၊ ကြိမ်ချောင်းအုပ်စုမှာ နေထိုင်တဲ့ ဒေါ်ကျင်လှ တယောက် ပုံမှန်အတိုင်း အိမ်အလုပ်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။
သားသမီးမြေးမြစ် ၂၀ ကျော်ရှိတဲ့ ဒေါ်ကျင်လှတို့ မိသားစုဟာ လယ်ယာလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးကြပြီး သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ ပျော်စရာကောင်းလှတဲ့ မိသားစုလေးတခုပေါ့။ ဒါပေမယ့် နာရီပိုင်းအတွင်း သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလှတဲ့ မိသားစုကြီးကို ဖျက်ဆီးတော့မယ့် ကံကြမ္မာဆိုးကြီးတခု ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာ ဒေါ်ကျင်လှတယောက် အဲဒီအချိန်က မသိခဲ့ပါဘူး။
မနက် ၁၁ နာရီ ခွဲခါနီး လောက်မှာတော့ သူတို့အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးလှတဲ့ ကမ်းနားက လေကြမ်းတွေ တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ တိုက်ခတ် လာခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေကြမ်းနဲ့အတူ ကမ်းနားမှာ ဒီရေကလည်း တရိပ်ရိပ်တက်လာတယ်။ ဒီရေတက်ပြီး လေကြမ်းတွေတိုက်တာဟာ မိုးဦးကျလေဦးကျ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့အတွက် ဒေါ်ကျင်လှစိတ်ထဲမှာ သိပ်မထူးဆန်းသလို ခံစားခဲ့ရတယ်။ အိမ်ရှေ့မှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ မြေးငယ်လေးတွေကို အိမ်ပေါ်တက်ဖို့ ခေါ်ပြီး သူတို့ တထပ်အိမ်လေးရဲ့ အိမ်တံခါးတွေကို လိုက်ပိတ် နေခဲ့ပါတယ်။
မွန်းတည့်ချိန် လောက်မှာ တိုက်ခတ်နေတဲ့ လေကြမ်းတွေနဲ့အတူ ကောင်းကင်တခုလုံးနီရဲလာပြီး လေနီကြမ်းတွေ တရစပ် တိုက်ခတ်လာတာ သူတွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တိမ်ညိုတိမ်မည်းတွေက ကောင်ကင်လုံးပြည့် နေရာယူထားပါတယ်။ ဒေါ်ကျင်လှတယောက် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို စိတ်ထဲမှာ အဆက်မပြတ်ရွတ်လို့ မြေးငယ်လေးတွေကို ကျစ်ကျစ် ပါအောင် ဆုပ်ထားတယ်။
လေနီရိုင်းတွေက ကြမ်းသထက်ကြမ်း၊ ရမ်းသထက်ရမ်းလာတော့ သူ့အိမ်ကလေး တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ လှုပ်ခါနေပါတယ်။ သူတို့ ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ “ကယ်ကြပါ” ဆိုတဲ့ အသံတွေကို စကြားနေရပြီ။ သူ့ရဲ့ စိတ်တွေလည်း ကယောင်ချောက်ချား ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ သူ့ တထပ်အိမ်လေးရဲ့အမိုးတွေအကာတွေက လေနီကြမ်းရိုက်ခတ်တဲ့ ဒဏ်ကြောင့် အဝေးဆုံးကို လွင့်ထွက်သွားပါတယ်။
နေ့လယ် ၁ နာရီကျော်ချိန်မှာတော့ “၀ုန်း” ဆိုတဲ့ အသံကြီးနဲ့အတူ သူ့အိမ်လေးကို လူတရပ်မြင့်တဲ့ ရေလှိုင်းကြီးတခု လာရောက်ရိုက်ခတ်ပြီး ဖြိုချလိုက်ပါတော့တယ်။ သူလည်း မြေးလေးတွေရဲ့လက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီး ပြိုကျနေတဲ့ အိမ်ထဲက ရုန်းကန်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ပြင်ကို ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အလွန်ပြင်းထန်ပြီး အလွန်မြင့်တဲ့ လှိုင်းလုံးကြီးတွေ ထပ်ရိုက်ခတ်လာပါတယ်။
ပြင်းထန်လှတဲ့ ရေလှိုင်းတွေက သူ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မြေးငယ်နှစ်ဦးလက်ကို ဖြုတ်ချပစ်လိုက်ပါတယ်။
“မြေးလေးရေ၊ သားလေး၊ အမလေး လုပ်ကြပါဦး” လို့ပဲ သူ အာကုန် ခြစ်အော်ဟစ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရေလှိုင်းကြီးနဲ့အတူ မျောပါသွားတဲ့ သူ့ရဲ့ ၁၀ နှစ်အရွယ်မြေးလေးဆီက “အဘွား” ဆိုတဲ့ အသံလေးတသံပဲ သူ နောက်ဆုံး ကြားလိုက်ရတော့တယ်။
ဒေါ်ကျင်လှ တယောက် မြေးငယ်လေးတွေဆီကို ရေလှိုင်းနဲ့အတူ လိုက်ပါပြီး လှမ်းဆွဲဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ပြင်းထန်လှတဲ့ ရေလှိုင်းကြီးတွေက သူနဲ့သူ့ မြေးငယ်လေးတွေကို ခွဲခြားလိုက်ပါပြီ။ မြုပ်ချီပေါ်ချီနဲ့ ရေလှိုင်းတွေနဲ့ မျောပါသွားတဲ့ မြေးငယ် လေးတွေကို ခဏတာပဲမြင်လိုက်ရတယ်။
သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်မှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ဆားငန်ရေတွေ ရောထွေးနေပါတယ်။ အလွန်ရေစီးမြန်တဲ့ရေလှိုင်းတွေထဲမှာ သူလည်း မြုပ်ချီ၊ ပေါ်ချီဖြစ်နေပါတယ်။ ရေကူးတတ်ပေမယ့် မြန်ဆန်လွန်းတဲ့ ရေစီးက သူ့ကိုကူးခတ်ခွင့် မပေးတော့ပါဘူး။ သူအသက် ရှင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ကောင်းကောင်း နားလည်လိုက်ပါပြီ။ လေနီကြမ်း၊ ရေလှိုင်းတွေနဲ့ အတူ မိုးတွေပါရွာလာ တယ်။ ရေစီးနဲ့ မျောနေတဲ့လူတွေ ကျွဲနွားတွေ၊ အိမ်တွေ ၊ သစ်ပင်တွေကို သူမြင်လိုက်ရတယ်။ “ကယ်ပါ” ဆိုတဲ့ အသံတွေ လည်း ကြားနေရတယ်။
ရွာတဲ့ မိုးစက်မိုးပေါက်တွေက သူ့အသားကို မီးစနဲ့ထိုးသလို ခံစားရပါတယ်။ သူ အသက်ရှုလို့ မရတော့ဘူး။ သူ့သားတွေ၊ သမီးတွေ ၊ မြေးငယ်လေးတွေရဲ့ မျက်နှာလေးတွေကို သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ တခုပြီးတခု မြင်ယောင်နေမိပြီ။ နောက်ဆုံး အချိန်မှာ သူ မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီး ဘုရားကို အာရုံပြုလိုက်တယ်။
ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမလား မဆိုနိုင်ဘူး သူ ရေစီးနဲ့အတူမျောပါရင်း ရုတ်တရက် တစုံတခုနဲ့ တိုက်မိသွားတယ်။ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး တိုက်မိတဲ့အရာကို အမိအရလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ ကံကြမ္မာက သူ့ကို မျက်နှာသာပေးတယ် ထင်ပါရဲ့။ သူ လှမ်းဆွဲလိုက်တာဟာ ရေစီးမှာယိမ်းနွဲ့နေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင် ဖြစ်လို့ နေတယ်။ ရေက အရှိန်နဲ့ စီးနေပေမယ့် သူဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အပင်ကြီးကို မျောပါသွားအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။
သူလည်း အပင်ကို အမိအရအားကုန် ကိုင်ဆုပ်လို့ အရှိန်အဟုန်ပြင်းတဲ့ ရေလှိုင်းတွေ၊ လေတွေ၊ မိုးရေတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့မြေးတွေ၊ သားသမီးတွေအကြောင်းကိုပဲ စဉ်းစားနေမိတယ်။ ၂ နာရီကျော်ကြာ လေကြမ်း၊ ရေလှိုင်းနဲ့ မိုးရေတွေရဲ့ဒဏ်ကို ခံရင်္ပြီးချိန်မှာ လေရောမိုးရော ရပ်စဲသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေကတော့ လုံးဝမကျသေးပါဘူး။ မိုးလေစဲလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ပင်လယ်တမျှ ကျယ်ပြောတဲ့ ရေပြင်ကြီးကိုပဲ သူမြင်တွေ့ရတယ်။ နောက်ကျိကျိ ရွှံ့ရောင်ရေတွေက မျက်စိ တဆုံး နေရာယူထားတယ်။ အချိန်က ၄ နာရီကျော် ၅ နာရီလောက်ရှိမယ်လို့ သူ့စိတ်ထဲခန့်မှန်းနေမိတယ်။
မှောင်ရီစပျိူးတဲ့ ညနေအချိန်လောက်မှာတော့ ရေတဖြည်းဖြည်း ကျလာတယ်။ ရေကျတာကလည်း အရမ်းမြန်ပါတယ်။ နာရီပိုင်းတွင်းမှာ ရေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြေပြင်ကိုမြင်ရတဲ့အထိ ကျသွားပါတယ်။ သူရောက်နေတဲ့ သစ်ပင်ထိပ်ဖျားကနေ မြေပြင်ကို တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာခဲ့တယ်။ သူ့မှာထဘီ မရှိတော့ဘူး။ သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေ၊ ကိုယ်တွေ လက်တွေ တအားကို နာကျင်နေတယ်။ ရေအရမ်းငတ်နေတယ်။ သူ့တကိုယ်လုံး အားအင်ချိနဲ့ နေသလိုခံစားရတယ်။ သစ်ပင် ခြေရင်းရောက်တယ် ဆိုရင်ပဲ သူခြေပစ် လက်ပစ်လှဲချလိုက်တယ်။ အဲဒီနောက် ဘာမှမသိတော့ဘူး။
သူပြန်နိုးတဲ့အချိန်မှာ နောက်နေ့ မနက်ပိုင်းရောက်နေပြီလို့ သိလိုက်ရတယ်။ သူ့မှာ အပေါ်အင်္ကျီ အစိမ်းရောင်နိုင်လွန် အနွေး ထည်ရယ်၊ ရင်ဖုံးအင်္ကျီရယ်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာကြည့်လိုက်မိတော့ သစ်သားအကျိုးအပဲ့တွေ၊ လူသေကောင်တွေ၊ အိုးခြမ်းပဲ့တွေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ၀က်၊ ကြက် သေတွေ၊ သစ်ပင် အကျိုးအပဲ့တွေနဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အပျက်အစီး တွေချည်းပဲ။ သူ ဘယ်နေရာကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာ လုံးဝမသိဘူး။
သူနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးအလောင်းက ထဘီကို ချွတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တုန်ရီချည့်နဲ့စွာနဲ့ သူ လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ လူသေအလောင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်။ နာရီဝက်လောက် လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဆယ်ဂဏန်းနီးပါးရှိတဲ့ လုအုပ်စု တစုကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ တချို့က အ၀တ်မပါ ကိုယ်တုံးလုံးတွေ ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီအဖွဲ့က သူ့ကို နွေးနွေး ထွေးထွေး ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ သူတို့လူစုဆီမှာ စားသောက်စရာ မရှိလို့ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ အုန်းပင် တွေက အုန်းသီးတွေခူးဆွတ်ပြီး အုန်းရေသောက် အုန်းသီးစားနေခဲ့ရတယ်။ မေလ ၆ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ ကမ်းနားမှာ ဆားချက်လှေကြီးတစီး တွေ့ရပြီး လှေပေါ်က အလုပ်သမားတွေက သူတို့ကို လပွတ္တာမြို့ဆီခေါ်သွားတယ်။
ညနေပိုင်းမှာ သူတို့ လပွတ္တာမြို့ပေါ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး အမှတ် ၂ အထက်ကျောင်းမှာ နေရာချထားပေးတယ်။ မေလ ၈ ရက် နေ့မှာတော့ သူ့ သား ၃ ယောက်၊ ချွေးမ ၅ ယောက်ကို ဒုက္ခသည်တွေ အဖြစ်နဲ့ လပွတ္တာ မြို့ပေါ်မှာ ပြန်တွေ့တယ်။ သူ့ မြေးလေးတွေကိုတော့ မြို့ပေါ်က စခန်းတွေမှာ လုံးဝ ပြန်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
သူ သကျမာရဇိန် ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကြီးရှေ့မှာ တိုးတိုးလေး ဆုတောင်းနေမိတယ်။ နောင်ဘ၀မှာ ဒီိလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး မတွေ့ပါရစေနဲ့လို့ …။ ။
(မေလ ၂ ရက်နေ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းက လွတ်မြောက်လာသူ အမယ်အိုတဦး၏ ပြောပြချက်ကို ပြန်လည်းရေးဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်)
မြို့တွင်း ကန့်သတ်မိန့် ရန်ကုန်တွင် ထုတ်ပြန်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ 21 2008 20:54 - မြန်မာစံတော်ချိန်
မိဘမဲ့ ကလေးများ လူကုန်ကူးခံရမှု အန္တရာယ်ရှိနေဟု လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ သတိပေး
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ 21 2008 20:32 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မုန်တိုင်းဒဏ်ထိ ဒေသများတွင် မိဘမဲ့ကလေးငယ်များ လူကုန်ကူး ရောင်းဝယ်ခံရမှု အန္တရာယ် ကြုံရနိုင်သည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့က သတိပေးပြောဆိုလိုက်သည်။
မိဘများ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် အသက်ဆုံးပါးသွားသဖြင့် အုပ်ထိန်းသူမဲ့ ကလေးငယ်များမှာ လမ်းပေါ်တွင် ကယ်သူရှာနေချိန် အမြတ်ထုတ်လိုသူ ကလေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်သူများ၏ သွေးဆောင် ဖျားယောင်းမှု အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သည့် အခြေအနေမျိုး ရှိနေသည်ဟု HREIB ခေါ် ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံ)က ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကလေးကို မွေးစားမယ်ဆိုပြီး တခြား ခေါ်သွားတဲ့လူတွေမှာ တချို့က စေတနာနဲ့ ဖြစ်သလို ကူးသန်းရောင်းချဖို့ ခေါ်သွားတဲ့ အမှု ၂ ခုလောက်လည်း တွေ့နေရတာမို့ ကျနော်တို့ စိုးရိမ်ပူပန်စရာအကြောင်း ဖြစ်နေတယ်” ဟု HREIB ၏ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။
ကွမ်းခြံကုန်းနှင့် ဒေးဒရဲတို့၌ အလှူရှင်ကားများ ဖြတ်သန်းရာ လမ်းကြောင်းတလျှောက် အစာတောင်းနေသည့် ကလေးငယ်များမှာ ကူညီသူများကိုသာ မျှော်လင့်နေကြရသည်။
“တချို့ အသက် ၁၄၊ ၁၅ အရွယ် မိန်းကလေးတွေဆိုလည်း ထမင်းအဝ စားရမယ့်၊ နေထိုင်စရာရှိတဲ့ ရန်ကုန်က ကာရာအိုကေ ဆိုင်တွေမှာ လုပ်ခိုင်းဖို့ ခေါ်သွားမယ့်လူရှိရင် အေးဆေး လိုက်သွားမယ့် အလားအလာ များနေတာ တွေ့နေရတယ်။ ဒီဒေသတွေမှာ ကလေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်။ မုန်တိုင်းကြီးက ဒီလမ်းကို ဖွင့်ပေးလိုက်သလိုပဲ” ရန်ကုန်မြို့မှ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတဦးက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း လပွတ္တာမြို့ တဝိုက်မှ ကလေးငယ် ၃ဝဝ ခန့်ကိုလည်း ဒေသ အခြေစိုက်တပ်ဟု ယူဆရသည့် စစ်တပ်က ကျွေးမွေးမည်ဆိုကာ ခေါ်ဆောင်သွားသည့် သတင်း ရရှိထားသည်ဟုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် Social Actions for Women အဖွဲ့မှ ဒေါ်အေးမာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အမေရိကန်အစိုးရ၏ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာ လူကုန်ကူးမှု ကာကွယ် တားဆီးရေး ဥပဒေကို လိုက်လျှောက်ခြင်း မရှိသည့် နိုင်ငံစာရင်း အမှတ် ၃ တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
ကလေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကို တားဆီး ကာကွယ်ရန်အတွက် သိကျွမ်းသူ လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကလေးများကို သွေးဆောင် ဖျားယောင်းမှုနောက် ပါမသွားစေရန် ပညာပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများကို မုန်တိုင်းဒဏ်ထိ ဒေသများသို့ ပို့ဆောင် ထားရှိခြင်းအပြင် ဒေသခံ လူထုကိုလည်း ကလေး ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု ကာကွယ်ရေး ပညာပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေပြီဟု ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ 21 2008 20:23 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ကယ်ဆယ်ရေးတွင် လူမျုိုးရေးခွဲခြားမှုရှိနေဟု တိုင်းရင်းသားလူငယ်အဖွဲ့ စွပ်စွဲ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ 21 2008 16:41 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားဖူးသည့်စစ်ပွဲကြောင့် လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ရာတွင် အစိုးရအနေဖြင့် စနစ်တကျ ခွဲခြားလုပ်ကိုင် နေသည်ဟု တိုင်းရင်းသားလူငယ်များက စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်သည်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ်တွင် ကရင်အမျိုးသားနှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သောစစ်ပွဲကြောင့် အစိုးရက အညိုးအတေးထား လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (မြန်မာနိုင်ငံ) - EYNG (M) က ယမန်နေ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကာ ပြောဆို လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
"အဲဒီစစ်ဆင်ရေးမှာ KNU နဲ့ စစ်တပ်က အကြီးအကျယ် တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ အပြစ်မဲ့ရွာသားတွေ သတ်ဖြတ်ခဲ့လို့ သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ သူတို့ ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေ အထောက်အထားတွေနဲ့သုတေသန လုပ်နေရပါတယ်။ သူတို့က လျစ်လျှူရှုထားတာလား မသိဘူး။ ပညာသားပါပါပေါ့နော်" ဟု လျို့ဝှက်လှုပ်ရှားနေသည့် အဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ကိုစိုင်းမင်းလွင်က ပြောသည်။
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် စကောကရင်၊ ပိုးကရင် လူမျိုးများသည် လူဦးရေအားဖြင့် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိကြောင်း EYNG (M) စာရင်းက ဆိုသည်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ်အတွင်း ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ဘိုကလေးမြို့တဝိုက် ကရင်သူပုန်များနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ အစိုးရတပ်များက လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပါ အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကေအင်ယူ ခေါ် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိုစစ်ပွဲတွင် ကရင်ရွာသား ၃ဝဝဝ ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ကေအင်ယူ ပြန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးလှငွေကလည်း အစိုးရ၏ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မှုသည် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ရှိနေသည်ဟု ပဲ့တင်သံထပ် ပြောဆိုလိုက်သည်။
"အဲဒီနေရာတွေဟာ သူတို့ကို ပုန်ကန်တဲ့နေရာ၊ ရန်သူလို့သတ်မှတ်ပြီး အခုထိ စောင့်ကြည့်နေတယ်။ အခုလို ဖြစ်လာတဲ့အခါ ထင်ရှားတဲ့အချက်က ဒီဒေသမှာ ဟိုင်းကြီးကျွန်းကနေ မုန်တိုင်းက စတင်လာတယ်ဆိုတော့ မုန်တိုင်းလာမယ်ဆိုတာ သိရက်နဲ့နှောင့်နှေးထားတယ်။ ဒီနေ့အထိ ကယ် ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ ရောက်အောင် မပို့သေးဘူးလေ။ နောက်တခုက တချို့နေရာမှာ အသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့ လူတွေကိုလည်း အမြန် လိုက်မရှာ ဘူး။ သူပုန်နယ်မြေမှာ အညိုးတွေ မပျောက်သေးဘူးဆိုတာ ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ ထင်ရှားတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် သွားတယ်ဆိုရင် လည်း ဗမာရွာတွေပဲ သွားတာပဲ" ဟု ဗိုလ်မှူးလှငွေက ပြောသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ ကရင်ကျေးရွာ ၄၅ ရွာခန့် ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်ခဲ့သည်ဟု သူကပြောသည်။
အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် လပွတ္တာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဦးအေးကြူက တော့ မြို့ပေါ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ခွဲခြားမှုမတွေ့ရဟု ဆိုသည်။ သို့သော် အလှမ်းဝေးသည့် ဒေသများအတွက် တော့ ခွဲခြားမှု ဖြစ်နိုင်သည့်စိုးရိမ်မှု ရှိနေသည်။
"မြို့ပေါ်တက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေဆိုရင် ရပ်ကွက်က နာရေးအဖွဲ့တို့၊ ဘုန်းကြီးတို့၊ လူငယ်တို့ ပုဂ္ဂလိကဆီကရတဲ့ အလှူတွေကိုတော့ မျှမျှတတ ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ နယ်မှာက အာဏာပိုင်တွေကနေတဆင့် နဝတ၊ မဝကတို့ကနေ လာတောင်း ဒါမှမဟုတ် ရဝတအစား ခေါင်းဆောင်တွေ လာတောင်းတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာတော့ ကြားကနေ ဖြတ်အုတ်သွားတယ်ဆိုတာတော့ သိတယ်။"
"မြို့ပေါ်မှာ အဲလို ခွဲခြားဆက်ဆံနေတာ မရှိဘူး။ တောဘက်အခြေအနေတော့ သူတို့ဆက်ဆံရေးက ကျနော် မသိဘူးပေါ့နော်။ ဒီ (EYNG) အဖွဲ့တွေ က သူတို့ ကွင်းဆင်းထားတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်မှာပေါ့" ဟု ဒေါက်တာအေးကြူက ပြောသည်။
Myanmar reiterates support for ASEAN-led mechanism for cyclone recovery
YANGON, May 21 (Xinhua) -- Myanmar Prime Minister General Thein Sein has reiterated support for an ASEAN-led mechanism and commitment of the government to work closely with the task force of the ASEAN-led mechanism, led by Secretary-General of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Surin Pitsuwan, saidapress statement at the end of Surin's two-day working visit to Yangon Wednesday afternoon.
Surin's Yangon visit was to formally and personally deliver and follow up on the decisions made on Monday's Special Meeting of ASEAN Foreign Ministers in Singapore, the statement said.
Surin stressed in the statement that his mission to Yangon was for ASEAN to take the lead in coordinating and liaising with the UN system and international community in assisting Myanmar to recover from cyclone Nargis.
During his talks with Thein Sein, Surin informed Thein Sein some key steps to be undertaken in implementing the ASEAN meeting's decisions, stressing that the expeditious execution of these steps would create an atmosphere of mutual confidence among all parties concerned and ensure the success of the tremendous tasks at hand, including the upcoming ASEAN-UN International Pledging Conference in Yangon on Sunday, May 25, and the rehabilitation, resettlement and reconstruction to follow.
Myanmar agreed at Monday's Singapore ASEAN foreign ministers special meeting to the establishment ofatask force which will comprise officials from each member nation with Surin as the chairman.
According to the meeting sources, the task force, which will channel international aid to Myanmar, will send some 270 relief personnel to the cyclone-ravaged country and members of the team will visit Myanmar cyclone-hit areas immediately to make assessment and determine the degree of destruction before extending the necessary relief assistance.
Meanwhile, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon is due to arrive Yangon Thursday morning to look into Myanmar's post-storm situation and discuss channels for scaling up quick relief efforts and prompt distribution of the aid supplies during his two-day visit in Myanmar.
Deadly tropical cyclone Nargis, which occurred over the Bay of Bengal, hit five divisions and states -- Ayeyawaddy, Yangon, Bago,Mon and Kayin on May2and 3, of which Ayeyawaddy and Yangon inflicted the heaviest casualties and infrastructural damage.
Hard-hit coastal towns in the southwestern Ayeyawaddy division include Haing Gyi Island, Laputta, Mawlamyinegyun, Bogalay, Phyarpon, Kyaiklat, Ngaputaw, and Dedaye, while worst-hit areas inYangon division comprised Kungyangon, Thanlyin, Kyauktan, Twantay, Kawmu as well as the Yangon city.
According to an updated official death toll, as many as 77,738 people have been killed with 55,917 still missing, totaling 133,655 in the disaster. The number of the injured went to 19,359.
Ban Ki-moon to meet Burmese leader
UNICEF in Burma believes that the number of children left without guardians is over 600 and could rise.
State media reported that Burmese government will set up orphanages for them but did not mention how many orphanages would be built.
While Burma's military regime said it is planning to establish orphanages for kids left behind,ahuman rights group for children, Asia Anti Children Trafficking, has urged the international community as well as the Burmese government to establishamechanism to protect the children from human traffickers.
The UN Secretary General, Ban Ki-moon, has said that efforts to help the victims of the Burmese cyclone have reachedacritical moment - as onlyaquarter of them have so far recieved aid.
Speaking at Bangkok airport on his way to Burma, Mr Ban outlined specific objectives for his visit.
He wants to speed up the free movement of aid and relief workers, and to discuss the country's long term needs. He's due to meet Burma's most senior general, Than Shwe, on Friday in the capital, Naypyidaw.
More than two million cyclone survivors are estimated to need help. About eighty thousand people have been confirmed dead.
A Burmese doctor who has come back from Irrawaddy delta after giving medical aid to cyclone victims said many more people may have died of starvation and the cold while waiting for rescuers after being hit by cyclone.
He added people are seeking shelter at monasteries as they have no help from the government.
The authorities in the town of Thonegwa in Rangoon division asked homeless people to give entry fees if they enrol the children for next academic year begins on2June.
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း ဗိုလ်ချုပ်မှူ...
မြန်မာ့မုန်တိုင်းဘေးကယ်ဆယ်ရေး အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာ ...
Myanmar reiterates support for ASEAN-led mechanism...